ရန်ကုန်တွင် အလှည့်ကျ လျှပ်စစ်မီးပေးဝေမှု ဧပြီ ၂ ရက်စမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရန်ကုန်တွင် အလှည့်ကျ လျှပ်စစ်မီးပေးဝေမှု ဧပြီ ၂ ရက်စမည်
ရန်ကုန်တွင် အလှည့်ကျ လျှပ်စစ်မီးပေးဝေမှု ဧပြီ ၂ ရက်စမည်
Posted by နွယ်ပင် on Mar 30, 2012 in Myanma News, News | 37 comments
ရန်ကုန်မြို့အတွက် လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဖြူးပေးဝေမှုကို ဧပြီ ၂ ရက်မှ စတင်၍ အလှည့်ကျမီးပေးစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့မှ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်လတ်ကပြောသည်။
မီးပေးဝေမှုကို နှစ်စဉ်ကဲ့သို့ A.B.C အုပ်စု (၃)ခုခွဲ၍ မနက် ၅ နာရီမှ ၁၁ နာရီတစ်ကြိမ်၊နေ့လည် ၁၁ နာရီမှညနေ ၅ နာရီတစ်ကြိမ်၊ ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီ အထိ တစ်ကြိမ်၊ ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၅ နာရီအထိ တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် အလှည့်ကျ ပေးဝေသွားမည် ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် အုပ်စုတစ်စု မှာ တစ်ရက်လျှင် ၆ နာရီကြာမီး ပေးချိန်နှစ်ကြိမ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အုပ်စုခွဲမီးပေးဝေရခြင်းမှာ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏမြင့်တက်လာ ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာ တိုး၍ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်မြင့်နေသဖြင့် အလှည့်ကျစနစ်အား လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဦးမောင်မောင်လတ်ကဆက်လက်ပြောသည်။
နှစ်စဉ်တွင် ဇူလိုင်လမှသာ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်ပေးသည့် စနစ်ကို ပြန်လည်စတင်သော်လည်း ယခုနှစ်၌ ဇူလိုင်လမတိုင်ခင်တွင် လျှပ်စစ်မီးအပြည့်ပေးသည့် စနစ်အား ပြန်လည်ကျင့်သုံးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်အလှည့်ကျမီးပေးဝေမှုအား H အုပ်စုအဖြစ် အရေးကြီး သောနေရာများအား ထိုစနစ်ကျင့်သုံးမည်မဟုတ်ဘဲထိုအုပ်စုဝင်များမှာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနေရာများ၊ ဆေးရုံများ၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအပါအ၀င် ဘဏ်အားလုံး၊ ဘူတာကြီး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လေဆိပ်၊ သံရုံး၊ စည်ပင်ရေစက်များ၊ နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ CNG ပေးဝေရာ နေရာများ၊ ရဲဌာနများအား တစ် နှစ်ပတ်လုံး မီးအပြည့်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
နွယ် ပင် has written 243 post in this Website..
View all posts by နွယ်ပင် →
အေပရယ်မှ စမယ်တဲ့လား… မီးပျက်နေတာတော့ ခုတစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ မလာတာများနေတယ်။ အလှည့်ကျက ကိုယ့်အလှည့်ဘယ်တော့လဲလို့တောင် ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။ မစခင်ထဲက ပျက်နေတာကြာလှပြီညီမရေ… မြို့ထဲနေသူတွေ အတော်ဒုက္ခခံစားရမှာ မြင်ယောင်နေတယ်။
အမလေး မီးတကယ် ပြန်ပျက်တော့မှာလား..
ဆူး တို့ ရပ်ကွက်မှာ မီးပျက်တဲ့ အချိန် ခြံ ထဲ ဆင်းနေလို့ မရဘူး အိမ်တိုင်းက မီးစက်ကြီးတွေ နဲ့ မီးခိုးတွေ ခြံပြင် ဘက်ကို ခေါင်းတိုင် လှည့်ထားတာ အသက်ရှုလို့တောင် မကောင်းဘူး။ မီးစက်မမောင်းနိုင်ရင် စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
တော်သေးတာပေါ့။ Aprilမှ စလို့။
အခုတောင် တနေ့ကို 5ခါလောက် ပျက်ပျက်နေတာ။
အလှည့်နဲ့ပေးရင်လည်း မီးအားပြည့်ရင် ကောင်းမယ်နော်။
မီးအားက အရမ်းကျတာဘဲ။ အရင်ကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးလောက်ပေါ့။
အခုတော့ ဇီးသီးနဲ့ အပြိုင် နင်လား ငါလားဘဲ။
Uncle Lay says:
“ ပိုနေလို့ရောင်းတာ” ။ ။ လိုသွားလို့ အလှည့်ကျပေးတာ….။
ဘာာာာာာာ မီးပျက်မယ်ဟုတ်လား …. ရက်စက်လိုက်တာ … ရက်စက်လိုက်တာ …. နွေခေါင်ခေါင်မှာ ပူပူ လောင်လောင်နေရဦးမှာပေ့ါ …. ညဘက်ဆို …. အဟင့် ရွတ်ဖတ် ….
နောက်ဆုံးတော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါပဲ
ဒါနဲ့ ထိုင်းကိုတောင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရောင်းမလို့ ဆို….ဆို….ဆို….
ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး
ကျောင်းဒဂါရဲ့ စကားလေးနဲ့ ပြောလိုက်ပါ့မယ်..
တားတားဒို့ ဂို စာသင်ပြ
Mical David ko Jar Yit says:
ဗိုက်ကြီး မဟုတ်လို့ တော်သေးတာပ
နို့မို့ဆို တညိုးဂီး ဖစ်နေမှာ…ခိခိ
ဟဲ့မိစိန်ပေါက် ဘီလိုဖစ်တွားတာတုန်းအေ့။ အခုတလောညီးတို့ဒွေနာမယ်လောက်ပြောင်းနေကြတာ။
မီးပျက်တဲ့ ကိစ္စကို ဧပြီ(2) မှ စမယ်လို့ ကြော်ငြာထားပင်မယ့်
အခုကတည်းက မီးတွေကတော့ ပျက်နေတာပါပဲ ..
တကယ်မီးဖြတ်တဲ့ အခါကျရင် အဆင်ပြေပြေ မီးဖြတ်နိုင်ဖို့
အခုကတည်းက ကြိုတင်အစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့ သဘောနဲ့
တစ်နေ့ကို (2ခါမှ 3ခါ) အထိ မီးဖြတ်အစမ်းလေ့ကျင့်ပွဲကြီး စတင်နေပါပြီ ….
2012 မှာ ဒွတ်ခ တစ်လှေကြီးကြုံရတော့မှာပါလား …။
မြို့နယ်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ အနီရောင်တွေ မြင်နေရလို့ ညစ်ပတ် စုတ်ပဲ့ တာလား…။
တရက်ကို ၄ . ၅ ကြိမ်လောက်မီးပျက်ချင်ယောင်ဆောင်တာ ဒီလိုစကားမျိုး ပြောချင်လို့လား…။
လားပေါင်းများစွာနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ တိုင်ခန်းကျဉ်းကျဉ်း နေသူတွေ အရှင်လတ်လတ် ငရဲ ကျပေတော့အံ့..။
ဘာမှ မဟုတ်ဖူး မြစ်ဆုံ ကိစ္စ ပြန်စ ချင် လို့ အကွက်ဆင်တာ။
ဒီတခါ လျှပ်စစ် ၀န်ကြီး ဘာ ပြော မယ် မှတ်လဲ၊ မြစ်ဆုံ ရေအား လျှပ်စစ် မှ မလုပ်ရင် မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် လျှပ်စစ် စွမ်းအင် မလုံ လောက် နိုင်ပါဘူး လို့ အရှက်မရှိ ပြောမယ် ထင်တယ်။
ခွေးသူခိုးအိုကြီးများ ၊ ဆွံ့အ နားမကြား မျက်မမြင် သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင် ကြွက်သူခိုးကြီးများ၊
အမလေးဗျာ.. သူတို့ကိုပြောရတာ ငရဲကြီးတော့မယ်ထင်တယ်။
Yoko Ono Bono says:
မီးမှန်ပေးမယ်ဆိုပြီးမီတာခတွေတက်ပြီးတော့….ဦးလေးတို့ ကစစ်သားတွေဖြစ်ပြီး ကတော့ပါရဲ့ -ာ-ည် ပါးစပ်တွေ နဲ့ … ” မယုံနိုင်ဘူးးးးးအချစ်ရေ အပြင်မှာ မီးပျက်သွားတဲ့ည “
ဟာ.. ဒို့ နိုင်ငံဂျီးက မီးခဏခဏလာဒယ်နော.. ဟို လဒ ပြောဒုံးက ပိုလို့ နိုင်ငံဂျားဒေါင် ရောင်းစားနေရပါဒယ်ဆို…??? ပြောတဲ့ပါးစပ်က ဘယ်အပေါက်နဲ့ မှားသလဲမသိ??? ဘာလုပ်လုပ် ခေါင်း(ဂေါင်း) သုံး စေချင်တယ်
မနှစ်ကတော့အစိုးရအသစ်မို့ မီးတွေကောင်းချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဒီနှစ်တော့ အစိုးရဟောင်းသွားလို့ဖြစ်မယ်။ ဒုံရင်းဒုံရင်းနဲ့ candle party ပြန်ကျင်းပရတော့မယ်။
မဲပေးတဲ့နေ့ မီးမလိုပါဘူး ဒီတော့ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက ဖြတ်ပါလား..
အင်း ၂ရက်နေ့မှ ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ ၁ ရက်နေ့ ရလာဒ်တွေကို စောင့်ကြည့်ဦးမလားဘဲ..
အချိတ်အဆက်နဲ့လုပ်တတ်တဲ့ သောက်ကျင့်လေးတွေပေါ့ ….
ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိပေမဲ့ ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်ပြောတာပဲ..
အမတ်မင်း က ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်ပြောတယ် ပေါ့ ….
ster kyawkyaw says:
လာရမဲ. အချိန်တော. အပြည်.အ၀ လာစေချင်ပါတယ်။
လူနေရပ်ကွက်တွေကို တတ်နိုင်ရင် ညပိုင်း (၆ နာရီ နောက်ပိုင်း) မှန်မှန် ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ စက်မှုဇုန် တွေက တော. တမျိူးပေါ.။
နေ ဒေါင်း says:
အစိုးရတရပ်ရဲ. ညံ့ဖျင်းမှုလို. ယူဆ နိူင်ပါတယ်
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးက ပြည်သူလူထု ကို
ကြိုတင် အစီရင်ခံခြင်း စာဖြင့်ဖြစ်စေအကြောင်းကြားခြင်းတို.ကို
ပြည်သူလူထုကို နိူင်ငံပိုင် ရုပ်သံများမှတဆင့်
MEDIA များကို ဖွပေးစေချင်ပါသည်ခင်ဗျား…………………………..
Thit Sar Lin says:
ဗိုက်ကလေး..ပျောက်နေတာကြာပြီ.. ညည်းရဲ့ ဆရာတွတ်ပီရော.နေကောင်းရဲ့လား
နွေရောက်တိုင်း မပျက်ပါဘူး .ရှေ့ နှစ် 2011 က နွေဆိုပေမယ့် မီးမပျက်ပါဘူး။ ကြားတာတော့ ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် က မှန်းချက် နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက် ဖူးလားလို့ ..
လျှပ်စစ်တွေပိုလို့ လျံလို့ နိုင်ငံခြားကိုတောင် ရောင်းရပါတယ်လို့ ပြောတဲ့ လူကို ရှင်းခိုင်းသင့်ပါတယ်။
နေဒေါင်းပြောသလိုပဲ အကြောင်းအရင်း ခိုင်ခိုင်မာမာပြပေးဖို့လဲ လိုပါတယ်။ ငါက ဒီဌာန က လူကြီးပဲ
ငါလုပ်ချင်သလို ငါလုပ်မယ် ၊ ငါလုပ်ချင်တဲ့ အချိန်လုပ်မယ် ဆိုတာတွေလဲ ပြင်ဖို့ အချိန်တန် နေပါပြီ။
ကြေငြာတာလား ?ပြည်သူ လူထုကို မျက်စိထဲ မထားပဲ လုပ်ချင်သလိုတွေလုပ်နေတုန်းပဲဆိုရင်
ဒီဌာန မှာ ဒီလိုလူကြီးတွေ ရှိသင့်သေးလား ဆိုတာလဲ သမ္မတ ကြီးကိုလဲ မေးချင်ပါတယ်…..
ရပါတယ် အလှည့်ကျပေးလဲ ပြသနာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီအလှည့်ကျကိုမှ အုပ်စုခွဲပီး ပေးတာကိုတောက်ညင်အကပ်ဆုံး ဒတောင်းဇားအုပ်စု အေ ဆိုရင် မီးမပြတ်ဘူး
အုပ်စု စီ – ဒီ ကျတော့ လာချိန်တောင် ကောင်းကောင်းမလာဘူး
အောင်မယ်လေ့ ချာချာရေ။ တူကြောတာနဲ့ အုပ်စု အေထဲမပါအောင်ဆုတောင်းရတော့မလို။ အင်းဘီရှိုရင်တော့မဆဲဘူးမှတ်လား။
ဖူလုံ ရုံမက..ပို့လျှံ..နေပါသဖြင့်…..ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို အမြဲ.သုံးတတ်သူတို့ ရေ….
ရန်ကုန်ကလူတွေ ကို အားကျမိသဗျာ ။ ကျုပ်တို့ မန်းတလေးမြို့ မှာဖြင့် ၊ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်နဲ့ ၊ “ မှောင်သောည မှာ မောင်ေxာပြ မယ် ( x=ဟ) ” ဆိုတဲ့ ဇါတ်သဘက်ကြီးကို အီးပီစီ က ကပြအသုံးတော်ခံနေတာ ကြာပေါ့ ။
တနိုင်ငံလုံးသုံးလို့ ၁၅၀၀ မကုန်ဘူးဆိုတဲ့ ဟိုအရှက်မရှိသောက်ရူး ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။
ဒင်းတို့စတက်ကတည်းက လုပ်လိုက်ရတဲ့ ဟိုက်ဒရိုပါဝါစီမံကိန်းတွေ-
သောက်သောက်လဲ ကုန်လိုက်ရတဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေ-
ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ရဲ့.. ကြားဖြတ်ရွေးပွဲရည်ရွယ်ပြီး. … (၀င်ပြိုင်တဲ့ပါတီ) အစိုးရက… အာဏာပြခြိမ်းခြောက်လိုက်တယ်လို့.. ခံစားရတယ်..
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တေ့ာ.. လူထုက..ေ–ာက်မြင်ကပ်ပြီး. ပြောင်းပြန်မဲပေးတာပေါ့..
မြန်မာပြည်တော့.. မသိ..။ :?
san di says:
ကျနော်တို့မန်းလေးကတော့အချိန်တိုင်းမီးပျက်နေတာကြာပါပြီ။ စက်မှုထဲမှာဆ်ို လာတာကမိနစ်ပိုင်း လောက်ပါပဲ။စက်မှုထဲကဆရာကတော်တစ်ယောက်က မိီတာခအများကြီးကျတာကို တိုင်လို့စိတ်ဆိုးပြီးမီးဖြတ်တာတဲ့။ စက်မှုမှာ ၀ပ်ရှော့ဆရာ ၊ဒိုင်နမိုဆရာ။ဘော်ဒီဆရာ။ဖရိန်ဆရာတွေရဲ့ မိန်းမတွေက်ို ဆရာကတော်ခေါ်တာလေ ။ဧရာဝတီကိုစချင်လို့ရမယ်ရှာနေတာထင်တာပဲ။ ဘ်ိန်းဘုရင် company မြစ်ဆုံရောက်နေတာဘာသဘောလဲ။ မြန်မာအဓိကအသက် ဧရာဝတီအတွက်ဆို အသက်စွန့် ပြီးတရုတ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပစ်ရမှာပဲ။ ဧရာဝတီမြစ်ရေကြောင့်ဒီလောက်အသက်ရှင်ခဲ့တာ ။အသက်စွန့်ရလည်းကျေနပ်တယ်။ နောင်လာနောက်သားများအတွက်ပေါ့ ။စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ မြန်မာပြည် မြေပုံထဲမှာ ”မိခင်ဧရာဝတီဟာမြောက်မှတောင်ထိစီးဆင်းနေတာလေ။ ထိပ်ကနေပိတ်လိုက်ရင် ဘုရား ဘုရား သမ္မာဒေ၀နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ လူယုတ်မာတရုတ်များကိုဖယ်ရှားပေးတော်မူကြပါ။